AMAGQWETHA ABO BABESAKUBA NGAMAPOLISA ABALASELISA IMBALI KAGEORGE FLOYD YOLWAPHULO-MTHETHO, UKUSETYENZISWA KWEZIYOBISI KWIINKUNDLA ZAMATYALA - IINDABA
Amagqwetha abo babesakuba ngamapolisa abalaselisa imbali kaGeorge Floyd yolwaphulo-mthetho, ukusetyenziswa kweziyobisi kwiinkundla zamatyala
Ezinye iifayili zenkundla ngamagqwetha akhuselayo kwiinyanga zamva nje zithatha indlela yokubeka ityala kwixhoba.
Ngu-Amy Forliti | I-Associated Press
Igqwetha lomnye wamagosa amane awayesakuba ngamagosa aseMinneapolis atyholwa ngokusweleka kukaGeorge Floyd liqaqambisa ulwaphulo-mthetho lukaFloyd lwangaphambili kunye nembali yokusetyenziswa kweziyobisi, limbiza ngokuba ngumntu okhohlakeleyo kunye nengozi ecacileyo eluntwini. Omnye ubambe imiba yezonyango ka-Floyd kunye nokuba likhoboka, esithi mhlawumbi wabulawa yi-fentanyl, hayi idolo entanyeni yakhe.
Ezinye iifayili zenkundla ngamagqwetha akhuselayo kwiinyanga zamva nje zithatha indlela yokubeka ityala kwixhoba. Sisicwangciso esiqhelekileyo sokuzikhusela esithi iingcali zomthetho ziya kusetyenziselwa ukubonisa amagosa enze ngokufanelekileyo, kunye nokuchasana nevidiyo ebonwa ngabantu abaninzi ebonisa ipolisa elimhlophe liguqe entanyeni kaFloyd phantse imizuzu esibhozo.
Derek Chauvin, ukusuka ekhohlo, J. Alexander Kueng, Thomas Lane kunye Tou Thao. (IOfisi kaSheriff kwiNqila yaseHennepin nge-AP)
Iingcali zithi isicwangciso sinokuthi sinxibelelane nephuli yejaji enokubakho, nokuba uninzi lwento ethethwayo ngoku ayinakuze ivele kwityala elimiselwe intwasahlobo elandelayo.
UDon Lewis, igqwetha elidumileyo leTwin Cities elingadityaniswanga neli tyala, uthe ayiqhelekanga into yokuba amagqwetha akhuselayo atyale imbono engobungozi bomntu oNtsundu kwijaji ukubonisa ukuba nakuphi na ukusetyenziswa kwamandla ngokunyanzeliswa komthetho kufanelekile. Uthe mnye kuphela okanye babini abagwebi ekufuneka babe namathandabuzo.
U-Floyd, indoda eNtsundu eyayibotshwe ngamakhaftina, yasweleka nge-25 kaMeyi emva kokuba uDerek Chauvin ecinezele idolo lakhe entanyeni ka-Floyd njengoko uFloyd wayesithi akakwazi ukuphefumla kwaye akashukumi. UChauvin utyholwa ngokubulala ngokwenqanaba lesibini, ukubulawa kwenqanaba lesithathu kunye nokubulala. UThomas Lane, uJ. Kueng kunye noTou Thao batyholwa ngokuncedisa kunye nokubulala zombini inqanaba lesibini lokubulala kunye nokubulala.
Ividiyo ebukeleyo yokubanjwa kuka-Floyd yajikeleza kwihlabathi jikelele, ibangela uqhanqalazo kwaye ikhokelele ekwandeni kwenkxaso yentshukumo yeBlack Lives Matter. UMike Brandt, igqwetha elikhuselayo elinganxulumananga neli tyala, uthe ukubala le vidiyo kunye nexesha elidlulileyo likaFloyd licebo elilungileyo.
Uzama ukutyhala i-pendulum umva ... kwezi vidiyo zimbi zikaChauvin ngedolo lakhe entanyeni kaFloyd, utshilo.
Amagosa angaphambili asenkundleni ngolwesiHlanu kwingxoxo ngemibandela eliqela, kubandakanya nesicelo sotshutshiso sokuzama la madoda kunye kunye nezicelo zokuzikhusela zokususa ityala eMinneapolis. Izicelo zokhuselo lokuchitha izityholo aziyi kuqwalaselwa kwingxoxo.
Kumaxwebhu acela ukugxothwa, igqwetha likaLane, uEarl Grey, wabhala malunga nezityholo zangaphambili zikaFloyd zokuphanga exhobile nokuba neziyobisi eTexas. Wabiza u-Floyd ngowayesakuba ngumtyholi, ummangalelwa onobundlobongela, ixoki, ikhoboka, umthengisi weziyobisi, kunye nobungozi. UMnu Floyd waye, njengoko amaGosa ayekrokrela, umlutha, uGrey wabhala. Ebembi ngaphezu koko.
UBen Crump, igqwetha losapho lukaFloyd, wayikhaba loo ndlela.
Yonke into ekufuneka uyazi kule vidiyo yoyikekayo, utshilo uCrump. Xa amapolisa esenza izinto ezingenakuthetheleleka, ukhuselo luhlala lubulala ixhoba kwakhona ngokukrazula imbali yabo kunye nokubulala umlingiswa wabo.
Ukuphanga eTexas akunakwenzeka ukuba kuvele ityala ngenxa yokuba bekungayi kuba yimfuneko ngaphandle kokuba amagosa ayenolwazi lwangaphambili ngalo. UKelly Keegan, elinye igqwetha elinganxulumananga neli tyala, uthe izehlo zangaphambili azinakubekwa enkundleni ukuze zityhole abantu, kwaye ijaji kufuneka ivavanye ukuba ulwazi luya kulinceda na ijaji ukuba lifumane izibakala okanye lishiye umbono ombi.
Ukubanjwa okudlulileyo okunokuthi kuvele kwityala sisehlo sikaMeyi ka-2019 apho amagqwetha akhuselayo athi uFloyd wenza ngendlela efanayo.
Umfanekiso wekhamera yomzimba osusela kumhla wokusweleka kuka-Floyd ubonisa uLane noKueng besondela kuFloyd owothukileyo, othi, andingomntu umbi! kunye nokuzabalaza, becela ukuba bangafakwa kwinqwelo yamajoni. UGrey wabhala ukuba ividiyo ibonisa ukuba u-Floyd wayenento emlonyeni wakhe efana nepilisi ye-fentanyl, eyanyamalala. Iingxelo ze-Autopsy zibonisa ukuba u-Floyd wayene-fentanyl kwinkqubo yakhe.
UGrey no-Eric Nelson, igqwetha likaChauvin, babhala ukuba ngexesha lokubanjwa kukaMeyi ka-2019, u-Floyd akazange aphulaphule imiyalelo yamagosa, wabeka into emlonyeni wakhe, kwafuneka asuswe emzimbeni kwisithuthi, emva koko waqala ukukhala. Kwimeko apho, iipilisi ezininzi ze-opioid zafunyanwa, kunye ne-cocaine, babhala.
UNelson wathelekisa ukuziphatha kukaFloyd kubo bobabini ababanjwayo, esithi: Ngokucacileyo, uMnumzana Floyd wayenemodus operandi ngendlela awenza ngayo xa esondela ngamapolisa ngelixa ezama ukufihla i-narcotics.
UKeegan uthe nokuba amagosa akanalo ulwazi lokubanjwa kuka-2019, amagqwetha akhuselayo angaphikisa ukuba uFloyd unomkhwa wokuginya iziyobisi, ukoyika, ukulila kunye nokuzabalaza xa esiya ngamapolisa.
UGrey wabhala ukuba uFloyd wabelana ityala ngokufa kwakhe.
Ekuphela kwento ekwakufuneka ayenze kukuhlala kwimoto yamapolisa, njengaye wonke ummangalelwa owabanjwa ekuqaleni, wabhala uGrey. Ngelixa ezama ukunqanda ukubanjwa kwakhe, eyedwa, uMnu. Floyd wasebenzisa kakhulu iFentanyl. Ngenxa yenqanaba lakhe lokunxila, ukuphefumla bekuya kuba nzima kakhulu. Ukusilela kwakhe ngabom ukuthobela imiyalelo kaMnu.
UNelson uphinde wancoma ukusetyenziswa kweziyobisi ku-Floyd kwixesha elidlulileyo, ebhala ukuba ukuvelisa imbali ka-Floyd yokukhotyokiswa kweziyobisi ayingomzamo wokubetha umlingiswa kaMnu Floyd. Kodwa, wathi, u-Floyd kusenokwenzeka ukuba wabulawa yi-fentanyl okanye indibaniselwano ye-fentanyl kunye ne-methamphetamine kwikhonsathi kunye neemeko zempilo eziphantsi kwakhe.
Umhloli wezonyango kwidolophu yakuchaza ukubhubha kuka-Floyd njengokubulala, intliziyo yakhe imile ngelixa evalelwe ngamapolisa kwaye intamo yakhe icinezelwe. Ingxelo eyisishwankathelo edweliswe ukunxila kwe-fentanyl kunye nokusetyenziswa kwe-methamphetamine yamva nje phantsi kwezinye iimeko ezibalulekileyo kodwa kungekho phantsi kwesizathu sokufa.
Indoda eyaqhuba isiya kubaqhankqalazi baseGeorge Floyd eSouthern California ifumana unyaka kunye nosuku entolongweni ngezityholo zompu.
Uhlaselo lwamapolisa ngo-2020-uninzi lolonyuso lubotshelelwe kungquzulwano nabaqhankqalazi.
ISan Jose: Ityala leklasi elilindelekileyo malunga nokuqhubekeka koqhanqalazo lwaseGeorge Floyd
Ngokwamanqaku abatshutshisi, uMhloli wezoNyango waseHennepin County u-Andrew Baker uxelele abatshutshisi ukuba ukungabikho kwezinye izizathu ezicacileyo zokufa, kunokwamkeleka ukulawula ukufa ngokugqithisileyo, ngokusekwe kwinqanaba le-fentanyl kwinkqubo kaFloyd. Uvavanyo lwezidumbu olwahlukileyo olwathunyelwa kusapho luka-Floyd lwagqiba ekubeni usweleke ngenxa yokuphefumla ngenxa yentamo kunye nomqolo.
ULewis noKeegan bathi isizathu sokufa kuka-Floyd siya kufikelela kwijury. Bathe kuya kuba nzima ukuphelisa lonke ucalucalulo kwiqela labagwebi abanokubakho, kwaye imibuzo ebuzwe ngexesha lokukhetha ijaji iya kubaluleka.
Ngelixa indlela yokutyhola ixhoba isenokubonakala ithandabuzeka kwabanye, uLewis uthe umsebenzi wegqwetha elikhuselayo ayikokukhuthaza imvisiswano ngokobuhlanga okanye ukuqhubela phambili uhlaziyo lobulungisa kulwaphulo-mthetho. Umsebenzi wakhe kukwenza ukuba umxhasi wakhe akhululwe.